Lokanga sy valiha: Any amin-dry Ragôva ny antsy maranitra | NewsMada
Lokanga sy valiha: Any amin-dry Ragôva ny antsy maranitra
Migadona indray ny faran’ny herinandro… Herinandro azo lazaina fa nanamarihana tsingerina lehibe ho an’ny tantaran’i Madagasikara. Nofohazina nandritra izany tokoa mantsy ilay fanamarihana ny 14 ok­tobra, fotoana nahazoana ny Repoblika, 62 taona lasa izay. Maro tokoa ireo diso fanantenana, nieritreritra ny hanarina ny fety tsy vita tamin’ny 26 jona. Nam­panantenain’ny mpitondra rahateo izany, saingy tsy mbola mety
amin’ny toe-draharaha ka hatao akory…
Fa tsy nahasakana ny lanonana isan-tsokajiny tany amin’ny faritr’i So­fia akory izany. Nison­gadina noho ny namany ity faritra ity, nandritra ny andro vitsivitsy. Voa­lohany, tany no ni­poiran’ny filohan’ny Repoblika voalohany, i Tsiranana Philbert. Va­lim-babena miampy pi-maso ho an’ny faritra sy ho an’ny mponina ny he­tsika rehetra izay natao. Faharoa, faritra anisan’ny midadasika, manan-karena ary be mponina i Sofia ka tokony hiroborobo fatratra.
Izay ny hita sy tazana. Fa fanehoana ny endriky ny fitsinjaram-pahefana koa ny nanaovana ny lanonana ofisialy tany Sofia. Nanamafy izany ny fisian’ny filankevitry ny governoram-paritra voalohany, natao tao Antso­hihy. Inona tokoa moa izany no tena asa miandry ireto governora ireto ? Izao vao manomboka mazavazava amin’ny be­sinimaro tsy dia miditra loatra amin’ny raharaha politika izany.
Maso sy sofin’ny filoha. Mahita sy mandre mivantana, manakaiky kokoa ny vahoaka. Tsy vitan’izay fa manatanteraka ny asa aman’andraikitra amin’ny fampandrosoana ny governora, raha ny nantitranterin’ny filoha. Mazava izao fa goavana ny andraikitra ho tanan’ny governora. Goavana toa izany koa ny fahefana eo am-pelatanany. Filo­ham-pirenena kely eo amin’ny faritra sahaniny… Any amin’izy ireo ny antsy maranitra ka izy no handidy sy hanapaka.
Mbola misy ireo tsy voatendry ny governoran’ny faritra hafa, saingy efa mametraka ny ahiahiny sahady ny mpanao politika. Ny mpilalao politika ny marimarina kokoa, satria manimbolo vola, voninahitra, indrindra, ny fahefana no tena kapoakany. Na hipetraka ho teknisianina aza, tsy maintsy mpanao politika kosa aloha ny governora. Ilay tena mpanao politika, mahafehy ny andraikiny an-daniny ary mahatohitra ny mpanenjika an-kilany.
Tsy tena mitovy man­tsy ny faritra rehetra e! Na ara-jeografia, na antony hafa, misy hatrany ireo faritra manan-tombo ko­koa noho ny hafa. Dis­trika valo, ohatra, no mandrafitra an’Atsimo Andrefana, raha toa ka enina ny an’i Vatovavy Fitovinany. Ito farany, izay hozaraina ho faritra , ary miteraka resabe ma­hafanina ny mpanara-baovao amin’izao fotoana izao. Inona marina ny tena olana ao ? Raha hovantanina kokoa, inona ny tena tombontsoa hiadiana ao ? Resaka hafa mbola azo roritina iny.
Misy faritra kelikely velarana, fa manankarena olona sy harena an-ki­bon’ny tany. Misy faritra migodàna, saingy sahirankirana noho ny toetany sy ny toetrandro, ohatra. Misy ny tena faritra lavitra andriana, ara-bakiteny. Miankina amin’ny asa sy ny ezaky ny faritra tsirairay anefa ny hampisongadina, na handentika azy ho takon’ny hafa.
Miresaka izay fitsinjaram-pahefana izay ihany, tsy maintsy hifaninana ireo governoran’ ny faritra 22, izay ho 23 atsy ho atsy. Mifaninana fa tsy mifandrafy… Tsy main­tsy manao izay hahatsara endrika azy sy ny faritra sahaniny eo anatrehan’ny fanjakana foibe tsinona. Samy hiezaka ny tsy hiankindoha firy amin’ny foibe rahateo. Ny tena andrandrain’ny maro, tsy ilay “ragôva” mpitsetsitra ny madinika, tsy ilay
tampoham-pahefana ka mam­pihorohoro ny olom-peheziny akory.